🥇हाम्रो साथीहरु कुकुरहरु लाई चुम्बन
हामी मध्येका कुकुरहरू हामी कसरी उठ्छौं, घर पुग्छौं वा उनीहरूले हामीलाई उनीहरूको प्रेम देखाउन चाहन्छौं भने उनीहरूले पाएको आनन्दको कदर गर्न जान्दछन्। " हाम्रा साथीहरूको कुकुरको चुम्बन " मा त्यहाँ सबैका लागि हुन्छन्: हो स्वाभाविक रूपमा यो यो चाटहरू हुन्छ जुन सँधै आरामदायक वा स्वास्थ्यकर हुँदैन, तर यो भन्नुपर्दछ, तिनीहरू सँधै ईमान्दार र मिठो हुन्छन्।
कसैलाई कुकुर चुम्बन चाहिएको छ?
र अन्तमा, ब्रुटसले तपाईंलाई घरमा " हाम्रा मित्र कुकुरहरूलाई चुम्बन गर्ने " सेवा प्रदान गर्दछ। हामी स्वयंसेवक भन्छौं जहाँ दौडन इच्छुक?
साथी र साथीलाई अंगालो
ठीक छ, यो चुम्बन होईन, तर के तपाईंलाई यो फोटो emanates भावनाहरू वर्णन गर्न शब्दहरू चाहिन्छ?
खुशी कुकुर आलिंगन
त्यो इशारामा विश्वको सबै मान छ। जनावरले आफ्नो आँखा बन्द गर्दछ र यसको पंजालाई यसको मालिकको वरिपरि राख्छ। कुनै चुम्बन आवश्यक छैन। एक चित्र हजार शब्दको लायक छ ...
एक चुम्बन भन्दा धेरै ...
कसैले पनि यस कुकुरले बच्चालाई दिएका कोमलताबारे छलफल गर्दैन। यदि ऊ उसको बच्चा हो भने ... उसले आमाको सबैभन्दा मीठा को हेरचाह गर्छ। सयौं चुम्बनहरू भन्दा त्यो मूल्यवान छ।
चुम्बन शिक्षित गर्दै ...
तपाईं मध्ये कोहीले सोच्नुहुनेछ कि यो तपाईंको अनुहारमा च्याट गर्नेबाट बच्न असम्भव छ, र तपाईं ठीक हुनुहुन्छ। तर मेरो आफ्नै अनुभवबाट म तपाईलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि होईन। व्यक्तिगत रूपमा, मैले मेरो कुकुरलाई मेरो मुख वा नाक नचिक्न बनाएको छु। उसलाई थाहा छ कि फोटोमा जस्तै गालामा चुम्बनहरू छन्, यद्यपि ती न त मेरो कुकुर नै हो न त मलाई।
भनिन्छ कि एस्किमोले एक अर्कालाई चुम्बनको रूपमा नाकमा नाक लगाए र अभिवादन गरे । यो ठ्याक्कै केस होईन, तर यस्तो देखिन्छ ... अभिप्राय, पक्कै पनि राम्रो छ।
घरमा कुकुर भएकाहरूमध्ये कति जना हाम्रो घरपालुवा जनावरलाई माया गर्ने " आक्रमण" देखेर छक्क परेनन्? यो हाम्रो अनुहारको पूर्ण जिब्रो हो जसले मानव स्वच्छताको साना साना मापदण्डहरूलाई पनि सम्मान गर्दैन। तर तिनीहरूलाई कसले बुझ्दछ? तिनीहरूलाई कसरी भनौं: त्यसरी मलाई तपाईले मलाई आफ्नो प्रेम देखाउन चाहानु हुन्न? तिनीहरू सकेसम्म कुइरो लगाईएका छन्, र हामी स्वास्थ्यकर उपायहरू लिन ...
आफ्नो मुड सुधार गर्न सानो चुम्बन
के तपाईलाई गाह्रो दिन थियो? के तपाई थकित हुनुहुन्छ र धेरै गर्न चाहानुहुन्न? निस्सन्देह , फोटोमा भएको जस्तो चाट्नु भनेको तपाईको थकानको लागि उत्तम उपचार हो , र तपाईबाट खुशी मिल्ने उत्तम तरिका जुन तपाईको घरपालुवा जनावरका लागि उत्तम पुरस्कार हो।
यो ज्ञात छ कि हामीसँग बस्ने जनावरहरूले हाम्रो मनस्थिति महसुस गर्छन् : आनन्द, उदासी, चिन्ता। यस अवस्थामा पिल्ला नयाँ परिवारको सदस्यको रोई सुन्छन् र जान्छन् कि उसलाई केहि घटिरहेको छ, उनलाई थाहा छैन भने पनि (वा हो)। खुट्टामा केही लीकहरूले उसलाई शान्त गराउन सक्छ ...
कान मा सानो चुम्बन
बुलडग पपीले पक्कै पनि महसुस गर्छ कि मानव पिल्ला ऊ जस्तो छोटो छ। बच्चा जस्तो छैन हुनत गर्न विश्वस्त उहाँलाई यति ध्यान दिएर, एक कुकुर तपाईं आफ्नो सानो मित्र चाट्नेछन् दिन्छ जो संग कोमल अस्वीकार गर्न सक्दैन।
यो छनोट हाम्रो कुकुरको भावना मा कुनै अध्ययन हुन अभिप्रेरित छैन। यद्यपि इथोलॉजिस्टहरू भन्छन् कि चुम्बन र लाइकले उनीहरूप्रतिको प्रेम, सबमिशन, र हामी प्रति सहानुभूति दर्शाउँछ। र यो पनि कि एकल चाटको साथ तिनीहरूले हाम्रो छालाको फेरोमोनहरू मार्फत जान्न सक्दछन्, हाम्रो मुडदेखि हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्थासम्म, र यसलाई हामीसँग बाँड्न वा यो राम्रो छैन भने सामना गर्न मद्दत गर्न चाहन्छन्। त्यसो भए, तपाईले " हाम्रो साथी कुकुरका चुम्बनहरू " कती टाढा जान सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ।
कालोलोनियाको ज्योतिष विज्ञान को सबै भन्दा साधारण व्यञ्जन
दुर्लभ जलीय जनावरहरू